News 18 Nepal || मलेसियामा नेपालसहित चार देशका नागरिकको प्रवेशमा रोक
काठमाडौं । मलेसियाले नेपालसहित चार देशका नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तानी र श्रीलंकाका नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
निश्चित समयका लागि रोक लगाइएको भए पनि कहिलेदेखि कहिलेसम्म लगाउने भन्ने बारे खुलाइएको छैन । यो निर्णय अनुसार कूटनीतिक र सरकारी पासपोर्ट भएका बाहेक अन्य कुनै पनि भिसामा यी देशका नागरिक मलेसिया प्रवेश गर्न पाउने छैनन् ।
यस्तै नयाँ श्रम स्वीकृति पनि बन्द गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति भने लिन सकिनेछ । विदेशबाटै पनि अनलाइन पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिनेछ ।
कोरोनाबाट विदेशमा थप १३ नेपालीले गुमाए ज्यान, कुन देशमा कति ?
अमेरिकामा नेपालीलाई सजाय, २ लाख ३० हजार डलर तिर्नुपर्ने
कुवेतमा तीन नेपाली समातिए, यस्तो छ कारण
मलेसियामा नेपाली सवार गाडी दुर्घटना, ४ जनाले गुमाए ज्यान
कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा थप ४१ जना नेपालीले गुमाए ज्यान
कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा कसरी फैलियो ? सीडीसीले दियो यस्तो सन्देश